Okusebenzayo nokungasebenzi ekukhangiseni okuku-inthanethi + amabhentshimakhi okhiye | Martech Zone
Okusebenzayo nokungasebenzi ekukhangiseni okuku-inthanethi + amabhentshimakhi okhiye
NgoMsombuluko, Ephreli 7, 2008 NgoMsombuluko, Disemba 19, 2016 Douglas Karr
UkumakethaSherpa's Umhlahlandlela Wokukhangisa ku-inthanethi we-2008 kanye neBenmarkmark + Amabhentshimakhi wazalwa ngenkolelo yokuthi ukukhangisa online okwamanje akuqondakali, futhi ngenxa yalokho, kusetshenziswa kabi. Lokhu akusho ukuthi abakhangisi abakhona kufanele bamane bandise imali ku-inthanethi. Esikhundleni salokho, sicabanga ukuthi abakhangisi abangathola ibhalansi phakathi kwezomnotho, ukukhomba okusebenzayo nokuxakaniseka, ukukhangisa okubandakanya kakhulu kuzofinyelela i-ROI engcono kakhulu kubo kanye nokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kwe-inthanethi kubathengi. Izingcezu eziningi ezihambayo zingena emkhankasweni we-inthanethi, ngakho-ke lona akuwona umsebenzi olula.
Isithiyo sokuqala, okumele sinqotshwe, ukuthi izibalo zemidiya yesikole esidala zincike emikhawulweni yemithombo yendabuko, eqondile, imidiya ye-analog, futhi ayikhombisi amaqiniso ezinto ezingekho emgqeni, ezokuxhumana ezidijithali. Ngalesi sizathu, izibalo zemidiya yedijithali zidinga ukwedlula ezinye, futhi zamukeleke ngokwengeziwe kubachwepheshe bezindaba. Enye yezindlela ezisobala zokungeza ubucukubhede kokuthengiwe kwemidiya yedijithali ukubhekisisa imvamisa. Imidiya yendabuko ayivumeli ukuthi imvamisa ilawulwe ezingeni ngalinye, kepha idijithali iyavuma. Ukufeza lokho, sithole imininingwane evela ku-InsightExpress ekhombisa ukuthi imvamisa ikuthinta kanjani ukusebenza kahle kwesikhangiso, sibheke amazinga okuguqulwa okuhlanganisiwe ngokuvama kokuvezwa okuvela ku-Doubleclick, sabe sesichaza ukuthi ungayisebenzisa kanjani inqubomgomo yokufaka imvamisa ezwakalayo kucebo ngalinye lokukhangisa.
Okunye ukukhawulelwa kokuhlelwa kwemidiya yendabuko kanye nezibalo ukungabhekwa kwekhwalithi ezingeni lomthengi ngamunye. Ngamasu okuthenga ngokwesiko, inani elithile "lemfucuza" liyisimo futhi kunzima ukusiphendulela. Abakhangisi beDijithali bangakwazi futhi kufanele baqoqe amamethrikhi wekhwalithi lapho behlela imidiya. Lokhu kungathatha izinhlobo eziningi, kusuka ekuqondisweni kokuziphatha okuthuthukile kuya ekunikezeni inani ngamanani wokuguqula. Sikhombisa izindlela zokwabela ikhwalithi ekubekweni ngokufakwa kwe-eyetracking, nokusebenza kwemithombo yezindaba ngezifundo ezisebenza ngempumelelo zemidiya. Iqiniso ukuthi ukubala ukufinyelela okusebenzayo kunokufinyelela nje kufanele kube yinto ejwayelekile kuzingxenyekazi zedijithali.
Asicabangi ukuthi kunenhlamvu yomlingo yokwakha isikhangiso esihle, futhi sikhuthaza abantu ukuthi benze ubuciko futhi bazame izinto ezintsha. Ngokuya ngocwaningo lwethu, ngabakhangisi abazama izinto ezintsha futhi bazihlole njalo ezenza kahle njalo. Sikhuthaza ngokuqinile ucwaningo nokuhlolwa futhi sikhombisa ubufakazi obuvela ocwaningweni lwethu lokuthi ucwaningo lwekhwalithi, oluthinta ukuqonda okwenziwa ekudalweni kwezikhangiso, empeleni lungasebenza ngokwengeziwe kumbono we-ROI kunokuthuthukisa ukulandela umkhondo noma ukuhlolwa kwe-A / B.
Ekugcineni, ama-Analytics adinga ukuba ngcono lapho efaka amamethrikhi amodeliwe ukuze asebenze kahle. Ngokuklama amadeshibhodi wokufaka uphawu womkhiqizo afaka phakathi amamethrikhi womkhiqizo akhonjisiwe kusuka kusampula yedatha yocwaningo ngokuqashelwa, amamethrikhi alandelwe afana nokuvelayo nokuchofoza, kungenzeka ukuthi abathengisi bathole isithombe esigcwele salokho okwenzeka ngempela ngomkhankaso oku-inthanethi. Kunedatha eningi kakhulu futhi akukho ukuqonda okwanele laphaya.
Asinazo zonke izimpendulo, kepha sinazo eziningi, futhi lapho singenakho khona, sinethemba lokunikeza ingxoxo, imibono emisha, nokuhlola. Ukuphusha ukukhangisa ku-inthanethi kusuka lapho ikakhona kuya lapho kungaba khona kuzoba inqubo ehamba kancane, kepha yiyona esibheke phambili ukuhlanganyela kuyo.
Tags: 2008zokubekisaukumaketha kwesherpa
Douglas Karr Monday, April 7, 2008 Monday, December 19, 2016
Thola Ukuphefumulelwa kepha Ungalandeli Amafomula
I-ProBlogger: Thenga ikhophi yencwadi kaDarren!
UNowa David Simon
Ngo-Apr 7, i-2008 ku-4: i-52 PM
ngeke kwenzeke. akukho ukukhangisa ezinkundleni zokuxhumana ngale kwezikhangiso ze-banner. Konke okunye kungogaxekile. Ukubheja okuhle kakhulu ukubekwa komkhiqizo kuma-youubub
Ngo-Apr 7, i-2008 ku-11: i-46 PM
Njengamanje ngisenkomfa ye-Ad Tech eParis futhi indikimba ephambili ephindaphindwayo nazi izinto ezintathu:
1. Ukufinyelela okubhekiswe - yize okuqukethwe nekhwalithi kubaluleke kakhulu, ukwazi imikhuba yabafundi bakho kubaluleke kakhulu. Izingosi zokuxhumana nabantu ziyizinqumo ezisobala ngoba nje zigcina imininingwane eminingi ngabasebenzisi bazo. Kodwa-ke, njengoba isikhathi siqhubeka nezindawo zokuqukethwe ezinhle zisekela ukufundwa kwazo kubabhalisile noma ngabe okuqukethwe kumahhala noma kuyimali ekhokhelwayo, lawa masayithi azoba yindawo ekahle yokubekwa kwezikhangiso eziku-inthanethi. Ukwakhiwa kwenethiwekhi ye-Forbes 400 blogger kuwubufakazi balokhu.
2. I-Ad Ad Spend eku-inthanethi - UMichael Kleindl waseWunderloop ucaphune ukuthi kungakapheli unyaka kusuka emaphesentini asetshenzisiwe, noma ngabe i-TV, umsakazo, amaphephandaba nokunye, u-10% uzobe eseku-inthanethi. Ngokwakhe wacabanga ukuthi ngisho u-10% ubuphansi kakhulu futhi unombono wokuthi i-UK izosondela kuma-50% kungakapheli unyaka.
3. Njengoba i-digital TV ikhula, ukukhangisa kwe-TV online kuyakhula futhi. Esinye isici esikhulu ukwanda kwejubane le-Intanethi. Ezinye izinkampani (kuzofanele ngibheke amanothi ami) zithembisa isivinini sokulanda esingu-100mb emakhaya abantu kungakapheli unyaka. Ngabe ukhona umuntu ozobuka ikhebuli noma i-TV esemhlabeni uma lokhu sekwenzekile? Kuzoba umncintiswano omkhulu.
Njengoba uDoug asho, kuzoba ngokubika kanye nokuhlaziya. Lokhu kungenzeka ukuthi kungani amanethiwekhi wokukhangisa etshala imali eningi kumakhasimende anobungani, ubuchwepheshe bokubika.
Ngokwami, ngikholelwa ukuthi kube nokuqala okuningi okungelona iqiniso kwe-Intanethi. Ngikholwa ukuthi njengamanje sihlangabezana nakho kuselula. Kodwa-ke, yize kunesidingo samanje sokukhangisa okusebenzayo okuphathekayo, i-Intanethi manje inesizukulwane sonke sabantu abaye baba nesikhathi sokufunda emaphutheni adlule futhi ekugcineni bakuthola kahle.
Ngo-Apr 8, i-2008 ku-8: 09 AM
Ungabonga uTim wakwa-Marketing Sherpa ngalokhu okuthunyelwe okuhle - ngibameme ukuba benze okuthunyelwe kwezivakashi futhi babeka isihloko esivelele! Impendulo yakho ivelele.